साउथमा बलिउड अभिनेत्रीको आकर्षण ! - GalaxyPati
ओमिक्रोन भेरिअन्ट फैलिन जोखिम
आज ४२ औं भाषाविज्ञान अनलाइन सम्मेलन हुँदै
पर्सा प्रहरीले ४ जना सहित लागु अौषध बोकेको ट्रकवाट लागुअौषध लियो नियन्त्रण
वन तथा वातावरण मंन्त्रीको प्रमुख अतिथ्यमा बृहत् पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा आयोजना
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कृष्णनगरको गोलघरमा दिप प्रज्वलन गरि भब्य रुपमा औपचारिक उद्घाटन
साउथमा बलिउड अभिनेत्रीको आकर्षण !
२०७८ कार्तिक ४, बिहीबार ०८:३४
एजेन्सी / केही वर्षयता साउथ इन्डियन फिल्महरूको क्रेज बढ्दो छ । विक्रम अभिनित आई, रजनीकान्त अभिनित रोबर्ट, प्रभास अभिनित बाहुबली, यश अभिनित केजीएफलगायतका फिल्मले साउथ इन्डियन फिल्महरूलाई बलिउडसँगै विश्व बजारमा परिचित गरायो ।
यी फिल्महरू पश्चात बलिउडमा त साउथको दबदबा नै सुरु भयो । बलिउडमा साउथका भइरहेका रीमेकभन्दा पनि साउथकै फिल्महरू डबिङ गरेर प्रदर्शन गर्ने प्रचलन बढ्यो ।
यसका साथै केही समययता बलिउड सुन्दरीहरू समेत साउथ इन्डियन फिल्ममा आकर्षित छन् । साउथ फिल्मका सुन्दरीहरू रश्मिका मन्दना, सामन्था, नयनतारा, कृति सुरेश बलिउड फिल्ममा देखिने तयारी भइरहँदा केही बलिउडका अभिनेत्रीहरू साउथ फिल्ममा देखिँदै हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय बलिउडमा फिल्म निर्माण गरिरहेका प्रोडक्सन हाउसहरू साउथ इन्डियन फिल्ममा लगानीकर्ताको रूपमा साझेदारी गर्ने क्रम बढेपछि बलिउड सुन्दरीहरू पनि साउथ फिल्ममा बढ्दो छन् ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा रिलिज भएको फिल्म ‘केजीएफ’मार्फत स्टार बन्नुभयाे यश । फिल्मको ट्रेलरदेखि नै चर्चामा रहनु भएका यशले रिलिजपछि फ्लोअर्स बढाउन सफल हुनुभयाे । फिल्ममार्फत उहाँको स्टारडम बढिरहँदा यसको सिक्वेललाई लिएर फ्यान प्रतिक्षित छन् । ‘केजीएफ’को सिक्वेलको प्रतीक्षा रहेका फ्यानहरूले सार्वजनिक टिजर मन पराइसकेका छन् । फिल्म आउँदो अप्रिलमा रिलिज हुने तयारीमा छ ।
सिक्वेलमा यश झनै शक्तिशाली देखिनु हुनेछन् भने उहाँले एक्सनमा नयाँ स्ट्न्ड गर्नुहुनेछ । यसमा यशसँगै श्रीनिधि शेट्टी पनि मुख्य भूमिकामा हुनुहुनेछ । सिक्वेलमा बलिउडका बाबा अर्थात् सञ्जय दत्त पनि देखिनुहुनेछ । उहाँले भिलेनको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ । फिल्म च्याप्टर फस्टझैँ पाँच भाषामा रिलिज हुनेछ । फिल्ममा रविना टन्डन पनि हुनुहुन्छ । यसमा उहाँले रामिका सेनको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकाेछ । यो उहाँको कन्नड फिल्ममा डेब्यु हो ।
करीना कपूर खान पनि साउथ फिल्ममा डेब्यु गर्ने हुनुभएकाे छ । उहाँले कवीर सिंह निर्देशक सन्दीप रेड्डी वांगाको निर्देशनमा बन्ने फिल्म ’स्प्रिट’मार्फत साउथमा डेब्यु गर्दैहुनुहुन्छ । फिल्ममा उहाँको को–स्टार प्रभास हुनुहुनेछ । प्रभास पछिल्लो समय साउथ फिल्मका सुपरस्टार हुनुहुन्छ । बाहुबली सिरिज पश्चात उहाँको फ्यान फ्लोअर्स निकै बढेको छ ।
यस्तै, प्रभासलाई बाहुबली बनाउने निर्देशक एसएस राजामौलीको निर्देशनमा तयार भइरहेको फिल्म ’आरआरआर’मार्फत अलिया भट्टले पनि साउथ फिल्ममा डेब्यु गर्दैहुनुहुन्छ । फिल्ममा जुनिएर एन्टीआर, राम चरण, अजय देवगन लगायतको अभिनय रहनेछ । निर्देशक राजमौलीले अप्रोच गरेकै कारण आलिया साउथ फिल्ममा तेलुगु सिकेर नै डेब्यु गर्नुभएकाे हाे ।
निर्देशक नाग आश्विनले निर्देशन गर्ने भनिएको फिल्ममा प्रभासको जोडी बन्नुभएकाे छ, दीपिका पादुकोण । यो उहाँको साउथ फिल्ममा डेब्यु हो । तेस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा तयार पारिने साइन्स फिक्सन फिल्मलाई लिएर दर्शक पनि उत्तिकै उत्साहित छन् । फिल्ममा अमिताभ बच्चनको अभिनय पनि रहनेछ । फिल्मलाई सन् २०२२ मा रिलिज गर्ने योजना यसको निर्माण पक्षको छ । हिन्दी, तमिल र तेलुगु भाषामा फिल्मलाई दर्शकले हेर्न पाउनेछन् ।
बलिउडमा पछिल्लो समय ’परम सुन्दरी’को ट्याग पाउनुभएकी एक्ट्रेस कृति सेनन पनि साउथ फिल्ममा डेब्यु गर्दैहुनुहुन्छ । उहाँले पनि दीपिकाझैँ स्टार प्रभाससँग जोडी बनेर डेब्यु गर्न लाग्नुभएकाे हाे । ‘तान्हाजी’ फिल्म निर्देशन गर्नुभएका ओम राउतको निर्देशनमा तयार हुने फिल्म ’आदिपुरुष’मा कृति सेनन देखिनुहुनेछ ।
फिल्मलाई लिएर दर्शक निकै उत्साहित छन् । पाँच सय करोडको बजेटमा बन्ने भनिएको फिल्मको २५० करोड रुपैयाँ त केवल भिएफएक्समा मात्र खर्च हुने भएको छ । निर्माण पक्षले देखाउनु पर्ने दृश्यको क्यालकुलेट गरेपछि यस्तो बजेट देखिएको हो ।
रोबर्टमा काम गरेर साउथ फिल्ममा अभिनय गरिसक्नुभएकी विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या राय बच्चन पुनः साउथ फिल्ममा देखिने हुनुभएकाे छ । निर्देशक मणिरत्नमको एक प्रोजेक्टमा उहाँको जोडी विक्रमसँग बाधिनेछ । यस्तै, बलिउड सुन्दरी अनन्या पाण्डे पनि पुरी जगन्नाथ निर्देशित फिल्म ’लाइगर’ मा देखिँदैहुनुहुन्छ । फिल्ममा साउथ इन्डिया अभिनेता विजय देवरकोण्डाको अभिनय रहेको छ ।